Madaxweyne Farmaajo oo la kulmay mid ka mid ah beelaha xusul-duubka ugu jira xilka R’iisul Wasaaraha – Kismaayo24 News Agency
Madaxweyne Farmaajo oo la kulmay mid ka mid ah beelaha xusul-duubka ugu jira xilka R’iisul Wasaaraha
by admin 19th February 2017 043
Xildhibaanada labada Gole ee Beesha Muddulood ayaa ka dalbaday Madaxweyne Farmaajo inuu xilka Ra’iisul Wasaare u magacaabo Beesha.
Beelaha Hawiye, sida H/gidir iyo Muddulood ayaa loolanka ugu weyn u dhaxeeyaa, waxaana soconaya kulamo beeshan ku leedahay qaar ka mid ah Hotelada Muqdisho oo ay olole weyn ugu jiraan xilka Ra’iisul Wasaaraha, waxaana kulamada bar bar socda gogol ay beelahan dhiganayaan.
Banaanbax lagu taageerayo Madaxweynaha Somalia oo ka dhacay….
Daawo: Madaxweyne farmaajo oo bilaabay la xisaabtanka wasaaraddaha maaliyadda iyo Cadaaladda maxaase ka soo baxay?
Dhageyso: Dhacdo Murugo iyo Naxdin badan oo laga soo sheegaayo qeybo kamid ah Gobolka Nugaal hooyo iyo wiil ay dhashay oo 8 Bilood jir ah ayaa la sheegay in….
Tifaftiraha K24 2nd December 2015
(SAWIRRO) – Dawladda Imaaradka Carabta oo Ciidanka Boliiska ugu deeqday Gaadiidka Ciidamada